ခွဲစိတ်ကုဆေးခန်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
တနင်္လာ-သောကြာ ၀၇.၀၀-၂၀.၀၀၊ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ ၀၇.၀၀-၁၉.၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၅၈၅-၇
ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံကြီးဟာ နိုင်ငံတကာဆေးရုံတစ်ရုံအနေနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့အထဲက အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်သတင်းကြီးမားတဲ့ JCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရထားတာဟာ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကြောင့်လို့ အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အထူးကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေဟာ ဦးနှောက်အကျိတ်တွေနဲ့ သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ခြင်းတို့ကစလို့ အရိုးများကျိုးခြင်းနဲ့ အက်ခြင်းတို့အထိ အမျိုးမျိုးသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေဟာဆိုရင်လည်း လူနာတွေအနေနဲ့ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဆေးရုံကဆင်းပြီး အိမ်ပြန်လို့ရတဲ့ အသေးစား၊ လှီးဖြတ်စရာမလိုတဲ့ ကုသမှုမျိုးတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ အချိန်တစ်ခုကြာအောင ဆေးရုံတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အကြီးစားခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအထိ အမျိုးအစားစုံလင်လှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေဟာလည်း တစ်ပတ်သားထက်ငယ်ကောင်း ငယ်နိုင်ပြီး ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အောင် အသက်ရှည်တဲ့ အဖိုးအဖွားတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော ကိရိယာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေ၊ သန့်ရှင်းပြီး သီးသန့်ဖြစ်တဲ့ အဆောက်အအုံနဲ့ အထူးပြုထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ပြုစုကုသမှုရရှိဖို့ အာမခံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါတို့ကဲ့သို့ အခြေအနေများအတွက် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်း –
အထွေထွေ ထိခိုက်မှုများနှင့် ဒဏ်ရာများ
ဦးနှောက်အကျိတ်များ (Brain tumors)
ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်း (Brain hemorrhages)
ဦးနှောက်ပြည်တည်ခြင်း (Brain abscess)
ခါးရိုးဆစ်ကျွံခြင်း (Herniated disc)
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ (Valvular heart)
အဆုတ်၊ ရင်သားနှင့် အသည်းအကျိတ်များ
သည်းခြေအိတ်၊ ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်း ကျောက်တည်ခြင်း
အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်း (Vasectomy)
သုတ်ရည်ဂလင်းကင်ဆာ (Prostate cancer)
ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း (Sprains, dislocations)
ကလေးငယ်များတွင် ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်များ ပုံမမှန်ခြင်း
အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည် –
ဝမ်းတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အူအတက်ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ကုသမှု (Laparoscopic appendectomy)
ဝမ်းတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အူကျွံနာ ကုသမှု
အ၀လွန်ရောဂါအတွက် အစာအိမ်သေးအောင် ခွဲစိတ်ခြင်း (Bariatric surgery)
မွေးကင်းစနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် ခွဲစိတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ
အဆင့်မြင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသော ပုံမှန်ခွဲစိတ်ခန်း ခြောက်ခန်း
အရိုးအဆစ် စမ်းသပ်ခန်း ငါးခန်း
အထွေထွေသုံးနှင့် အရိုးအက်ခြင်းများအတွက် ကြပ်စည်းပေးရန် ကုသခန်းများ
အရိုးတွင်း သတ္တုဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း (BMD) တိုင်းတာစက်
ကျွန်ပျူတာဓါတ်မှန် နှင့် ကျောရိုးကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၁၁၉၄-၅
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၈:၀၀ - ၂၂:၀၀
၆၆ (၀) ၂၄၃၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၈၃၀၀၊ ၈၃၀၁
Yotsawee Sanguanjin, M.D.
Aran Khantong, M.D.
Yossawee Wongcharoen, M.D.
Supawee Techateerawat, D.D.S
Phakorn Liamseng, M.D.
Pongthep Pisarnturakit, M.D.
Suwit Khlangpremchit, MD.